Shikhar Post » हानको अध्यक्षमा सिर्जना राणा निर्वाचित, कार्यसमितिमा अरु को को ?
हानको अध्यक्षमा सिर्जना राणा निर्वाचित, कार्यसमितिमा अरु को को ?
काठमाडौँ । होटल संघ नेपाल(हान)को अध्यक्षमा होटल अन्नपूर्णकी सिर्जना राणा निर्वाचित भएकी छिन् । संघको ४६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति विहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच घोषणा गरिएको हो ।
साधारण सभाले प्रथम उपाध्यक्षमा एयरपोर्ट होटलका विनायक शाह, द्वितीय उपाध्यक्षमा होटल साङ्ग्रिलाका प्रबिनबहादुर पाण्डे, महासचिवमा काठमाडौँ प्रिन्स होटलका साजन शाक्य र कोषाध्यक्षमा होटल बैशालीका विशालकुमारलाई निर्वाचित गरेको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा निर्वमान अध्यक्ष अमरमान शाक्य(अमर होटल), सोल्टी होटलका दिनेशबहादुर विष्ट, ओरियन्टल÷र्याडिशन होटलका बिधाता श्रेष्ठ, होटल हिमालयका दिनेश तुलाधर, होटल शंकरका विनोदशंकर श्रेष्ठ, बाराही रिसोर्टका विप्लब पौडेल, ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्टका गोपाल राना, शम्बाला होटलका टेस्टेन, होटल कमलका रामकुमार पुरी, होटल क्राउन प्लाजाका युवराज श्रेष्ठ, होटल गणेश हिमालका ठाकुरप्रसाद पोखरेल र होटल याम्बुका राजेन्द्र भट्ट चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको घोषणा सभा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।
सो अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राणाले इतिहास मै पहिलो पटक महिलालाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा सबै होटल व्यवसायी सदस्यहरुमा धन्यवाद दिइन् । होटल व्यवसायीहरुलाई राज्यले पनि सहयोग गर्नु पर्ने बताउँदै पर्यटनको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा होटल व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई भव्यताका साथ सफल बनाउन होटल व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।